Kani waa maqaal ku saabsan meere.
Eris (Af-Soomaali: Eris) waa duniyar oo laga dhex helo Bahda Qoraxdu Midaysay, iyo mida 9aad ee ugu cufka iyo miisaanka culus dhamaan sheeyada ku wareega qoraxda. Dunidan yar Eris dhererkeedu waa 2326 km (±12); taasi oo 27% ka miisaan culus dunidayar ee Bluto, una dhiganta 0.27% cufka iyo miisaanka dhulka.
Muuqaalka dunidayar ee Eris.
Dunidan yar waxaa helay xidigisyahan Mike Brown sanadkii 2005ta, waxayna leedahay hal bil oo lagu magacaabo Dysnomia. Masaafad fogaanta ay Eris u jirto qoraxda waxaa lagu qiyaasay 96.4 AU sanadkii 2014ta.
Maadaama ay ka xajmi weyn tahay Bluto, dadkii helay iyo NASA labaduba waxay ku naanayseen ineey tahay meeraha 10aad ee Bahda Qoraxdu Midaysay. Guud ahaan, dunidan Eris iyo Bluto, Ceres, Haumea iyo Makemake waxay isku yihiin guruub la isku yidhaahdo "dwarf planets".
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Eris&oldid=187163"
Last edited on 7 Diseembar 2018, at 15:22
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Diseembar 2018, marka ee eheed 15:22.